Guddi loo saarey Xildhibaan lagu xayiray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddi loo saarey Xildhibaan lagu xayiray Muqdisho
Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa Guddi xaqiiqo raadin ah u saaray Xayiraadii Safar ee dhawaan ay sheegtay Xildhibaan Daleys Xasan Aadan in lagu sameeyay xilli ay doonaysay in ay aado degmooyin ka mid ah gobolka Gedo.
Gudoomiyaha golaha Shacabka ayaa Guddiga ka dalbaday in baaritaano lagu sameeyay sababta keentay xildhibaan loo diido in uu aado degaankii laga soo doortay, islamarkaana Garoonka Muqdisho lagu xayiro.
Warqad qoraal ah oo ka soo baxday Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo loo diray Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha ayaa lagaga dalbaday in muddo labo todobaad gudahood Baarlamaanka ku hor-keenaan warbixin dhameystiran oo ku saabsan xayiraadii lagu sameeyay Xildhibaan Daleys Xasan Aadan.
25 Bishaan ayay Golaha Shacabka ka hor sheegtay in xayiraad ay ku sameeyeen Ciidanka Hay’adda NISA xilli ay kusii jeeday gobolka Gedo, waxaana falkaasi cambaareeyay xildhibaano ka trsan golaha Shacabka.
Xildhibaan mucaarad ahaa oo beeniyey in Ciidamo Itoobiyan ah la geeyey Dhuusamareeb
Liiska Odayaasha saxiixayaasha Galmudug oo la shaaciyay